ब्लग : कानुनमन्त्रीज्यू राजीनामा दिनुहोस्
नेपाल लाइभ आइतबार, साउन ६, २०७५, १४:४७
नेपालको संविधानमा महिलाका लागि हक, अधिकार, सहभागिता र आत्मसम्मान बिभिन्न तह र तप्कामा सुनिश्चत गरिएको भन्दै दलका नेताहरु भाषण गरेर थाक्दैनन्। प्रचण्ड बहुमत पाएको सरकारले पनि मतादेश अनुसार जनादेेश ग्रहण गरेको छैन | सरकार दिनप्रति दिन विवादित र आलोचित बन्दै गर्दा जनताको सरकारप्रतिको आशा र विश्वासको ग्राफ दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय ग्राफ घटाउने काम गरे, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले।
मन्त्री तामाङले महिलाको आत्मसम्मानमा गम्भीर प्रहार गरेका छन्। एक विद्यालयमा भएको कार्यक्रममा उनले बंगलादेशमा पढ्न गएका नेपाली चेलीले आफ्नो शरीर सुम्पेपछि मात्रै डिग्री सर्टिफिकेट पाउने भन्दै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तै उनले बंगलादेश गएकै कारण विमान दुर्घटनामा परि २१ जना चिकित्सकको ज्यान गएको समेत लज्जास्पद भनाइ राखेका छन्। यी अभिव्यक्तिका कारण उनी अहिले सर्वत्र आलोचित भइरहेका छन्. यी अभिव्यक्ति दिनुको ध्येय अभिभावकलाई तर्साउनु, भड्काउनु र नेपालमा मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जबरजस्ती प्रवेश गराउनु भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ।
यति उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिबाट यति हलुका टिप्पणी सोच बाहिरको कुरा थियो, त्यसैले अनलाइनमा आएको कुरा सुरुमा विश्वास लागेन। जब भिडियो हेरे, दुई तिहाई मतले निर्देशित सोच र भावनाको दर्शन पाए।
यो लेख्दै गर्दा तपाईले माफी माग्नु भएको खबर सार्वजनिक भयो। तर, चित्त बुझेन। तपाईले बंगलादेशमा हिंसा छ भन्ने कुरालाई विज्ञप्ती लेख्नु भएछ। तर, तपाईले भन्नु भएको अभिव्यक्ति विल्कुल नारी केन्द्रित छ, उनीहरुको चरित्रमाथि धावा बोल्नु भएको छ।
बंगलादेशमा हिंसा भएको रेकर्ड छ तपाईसँग? एकजना छात्राको मृत्यलाई आवश्यक छानविन गर्ने की, नेपालमा नीजि मेडिकल कलेज खुल्नै पर्छ भनेर भित्री मनको आकांक्षालाई जोड दिन हावादारी बोल्ने? अनि तपाईले कहाँबाट सुन्नु भएको हो? कतै दुर्गा प्रसाईबाट त होइन? जो आफै यहि प्रसंगमा आलोचित भइरहेका छन्, जेल हाल्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ|
मन्त्रीज्यू, हो दु:ख छ बंगलादेशमा। त्यो दु:ख मेहनत र पढाइमा छ। निरन्तर नपढ्ने विद्यार्थी पास हुँदैन। पास गर्नेहरु सबै फस्ट डिभिजनका हुन्छन्। ६०% तल ल्याउने पास हुँदैनन्। निकै मेहनत गर्नुपर्छ। सामाजिक सहिष्णुता छ बंगलादेशमा।
मेहनत, लगनका साथ अध्ययन गरिरहेका छात्राहरुको अश्मितामाथि जुन नैतिक प्रहार गर्नु भयो, यो खेदपूर्ण छ।
जथाभावी बोल्ने अनि पछि 'हलुका' माफी मागेर पन्छिने परिपाटी नेपालमा चल्दै आएको छ। सक्नुहुन्छ भने यो पारिपाटी अन्त्यका लागि पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहोस्।
अर्को कुरा बंगलादेशबाट बिभिन्न उजुरी आएका छन् र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सोबारे प्रतिवेदन भनेर तपाईले झुटको पनि सहारा लिनु भएको छ। तर, काउन्सिलकै सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीले स्पष्ट रुपमा कुनै पनि प्रतिवेदन नभएको बताइसक्नु भएको छ।
मेरो प्रश्न छ। नेपालका डाक्टरको विश्वास नलागेर प्रधानमन्त्री उपचार गराउन विदेश जानुहुन्छ हो?
आकस्मिक घटनालाई किन स्वार्थसँग जोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता स्पष्ट छन्। यो कुतर्क शोभनीय छैन। देश वा विदेश अध्ययन भनेको मानिसका रुची, आवश्यकता, योग्यता, क्षमता र छनोटमा भरपर्ने कुरा हुन्।
हिजो एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बंगलादेशबाट छात्राहरुले नेपाली हुँ, डर मान्दिन, ढाका बोर्ड टप गरेको छु, भनेको सुन्नु भएन? सरकारले मुख नसिलाए हामी सिलाउँछौ भनेको अभिव्यक्ति सुन्नु भएन? नेपालीहरु किन विदेशिन्छन् भन्नेबारे आम नेपाली भएर अब अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्। अध्ययनको कमी छ तपाईमा। शाख जोगाउनुहोस्, राजीनामा दिनुहोस्।